Abenzi baseChina abasebenza ngokwezifiso zebhayisikili bezintaba, abahlinzeki, ifektri - Ikhotheshini - iDongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Ikhaya > Ojosaka > Ezemidlalo ubhaka > Ubhaka webhayisikili wasentabeni
(1) Sizokwenza konke okusemandleni ukusindisa izindleko. (2) Sizoxhumana njalo amahora angama-24. Sizosebenzisa ukuxhumana okusebenzayo ukuqinisekisa ukuxhumana kwemininingwane ebushelelezi. (3) Ngemuva kokuthi isampula selithengisiwe, uma uhlelo lokuqala ludinga ukuguqulwa, sizoguqula isampula ngokwemininingwane yokuguqulwa. Yonke inqubo yokukhiqiza isampula yohlelo lwesibili ayikhokhelwa ngokuphelele. (4) Ibhokisi lethu leposi lisebenza ngokuphelele futhi linabasebenzi abangochwepheshe bamakhasimende. Ungasibhalela ukuze ubonisane nezikhalazo nganoma yisiphi isikhathi. Sizofunda futhi siphendule kahle nangokucophelela. (5) Sizolawula ngokuqinile ikhwalithi yemikhiqizo futhi siyilethe kuwe ngezinga lokuphasa elingu-100%.
1. Ungawukhetha kanjani ubhaka webhayisikili wasentabeni?
Ukukhetha ubhaka webhayisikili ofanele ikakhulu kuya ngesikhwama ohlela ukusithenga
(1) Ubhaka webhayisikili wasentabenis need to have ergonomic characteristics, which will help improve the comfort and stability of the backpack. The body positioning of a person when riding a bicycle is very different from that of walking, hiking, running, etc.
(2) Ukuhamba: Uma uhlela ukusebenzisa ubhaka wakho webhayisikili ukuya esikoleni noma ehhovisi, sicela uqiniseke ukuthi ukulungiselela lokhu. Izikhwama zabagibeli zivame ukuba nezindawo ezinamaphakethe we-laptops namaphilisi. Babuye bathambekele ekubekeni amapeni, iphepha nabanye abagqugquzeli abahlukahlukene ngamadeski abo. Qiniseka ukuthi isikhwama sesikole singagibela ngokunethezeka lapho izincwadi zilayishwa. Uhlelo lokubopha esikhwameni sabagibeli luvame ukuba luhle, kepha alusebenzi kahle. Uma indawo yakho yokugibela inzima futhi ingalingani futhi idinga ukuzivocavoca umzimba okuningi, sicela usebenzise ubhaka webhayisikili wasentabeni esikhundleni salokho.
(3) Ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni: Uma kuqhathaniswa nojosaka bebhayisikili abajwayelekile, ojosaka bezintaba zebhayisikili banenzuzo enkulu. Banamanye amasistimu ebhande elihamba phambili emakethe. Lapho egibela ngaphandle komgwaqo, umgibeli kufanele azulazule ukugcina ibhalansi nendawo emaphakathi namandla adonsela phansi endaweni efanele. Lokhu kuhamba komgibeli kuvumela abaklami besijosaka ukudala amasistimu angavikela ubhaka noma kuphi. Ngakho-ke, ubhaka webhayisikili wasezintabeni osezingeni eliphakeme ungagona umzimba wowugqokile, futhi unebhande elibekekayo, elinesifuba, amahlombe namabhande okhalo.
(4) Ibhayisikili lomgwaqo noma ibhayisikili: Uma ungumgibeli webhayisikili (ochwepheshe noma othanda kakhulu), ungahle uthande umswakama osindayo noma ivesti. Ngeke uphathe izinto eziningi kakhulu, ukufinyelela okulula (ngokwesibonelo, ibhande lamanzi ehlombe noma ulayini wokuhambisa amanzi) kuzoba okubaluleke kakhulu.
2. Ubhaka webhayisikili wasentabeni product parameters (specifications)
Indwangu yeNylon Oxford
Izinto zingashintshwa njengoba kudingeka
Indwangu ye-210D yenayiloni ye-Oxford
Ubude 26cm X ububanzi 23cm X ukuphakama 46cm
3. Yisiphi ubhakha wesayizi webhayisikili owudingayo?
Kungashiwo ukuthi into ebaluleke kakhulu okufanele uyicabangele lapho ukhetha ubhaka webhayisikili ngosayizi.
Udinga ukuhlala ukhululekile lapho uhamba ngebhayisikili. Uma ubhaka ubukhulu kakhulu, ungadala ukuthi amathayi angemuva ahlikihle noma kukwenze ume ngendlela engeyinhle. Udinga ngempela ukucabanga ukuthi udinga usayizi ongakanani ukuze ulingane kahle nemishini yakho.
Uma uhlala e-United States, uzobona ukuthi amaphakheji amaningi amakwa ngamalitha. Akunasidingo sokuzihlupha ngokukuguqula kube yizinyawo ezingama-cubic noma okuthile okujwayele kakhulu, ungasebenzisa uhlu olungezansi njengesiqondisi esisheshayo.
· 10L kuye ku-15L = ukupakisha okuncane nokuhlangene
· 16L kuya ku-20L = iphakethe eliphakathi nendawo
· 20L ukuze 30L = ezinkulu
· Amalitha angama-30 + = angaba makhulu kakhulu ohambweni oludumile
Akukaze kube umqondo omuhle ukuthola ipotimende elinesikhala esengeziwe - ngoba nje. Kulabo abafuna isikhala esingeziwe, isixazululo ukuthola ubhaka onganwetshwa.
Isikhala esisalele ngokuvamile sitholakala ngoziphu, okhipha okweqile lapho kuvulwa, ngaleyo ndlela kwenze igumbi elikhulu libe likhulu. Lapho ibhande lokuminyanisa likhululiwe, kusenezikhwama ezithile ezingavulwa ngaphezulu. Inketho ngayinye ukukhetha okuhle, ngakho-ke khetha leyo ocabanga ukuthi izoba ngcono. Zizokusiza ukuthi ube nesikhwama esifanelekile, futhi uzothola kaningi ukuthi uziphu wokunweba uvaliwe.
Isandiso sokugcina esisebenzisekayo yisikhwama esiphezulu esigoqekayo. Izikhathi ezimbalwa phezulu ziqedwa phansi, kukhulu isikhala sokupakisha.
Kuwo wonke ama-minimalist laphaya, qiniseka ukuthi awukhethi ubhaka omncane kakhulu Kunesizathu sokuthi kungani ukhetha ubhaka. Qiniseka ukuthi ubhaka mkhulu ngokwanele ukulingana ifoni noma amathuluzi akho, noma ezinye izinto ofuna ukuziphatha zinquma ukuthi kufanele uthole isikhwama sebhayisikili.
4. Ungawukhetha kanjani umsebenzi wesikhwama sebhayisikili sezintaba?
Iphakethe le-Laptop. Njengoba kushiwo ngenhla, ama-laptops namaphilisi kuvamise ukuthwalwa ngabagibeli. Amaphakheji amaningi eza namapokhethi ahlanganisiwe ukuvikela utshalomali lwakho lukagesi. Igumbi lelaptop elijwayelekile lingahlala kuma-laptops afika ku-15-intshi. Kodwa-ke, uma ubukeka kanzima ngokwanele, uzothola ukuthi ubhaka onamapokhethi akhethekile ungabamba ama-laptops afinyelela kumasentimitha ayi-17.
Ikhava yemvula. Isembozo semvula sivimbela amanzi ukuba agobhoze aphume kubhaka wakho wangempela futhi sigcina izinto ezigcinwe ngaphandle kwamanzi. Okunye okugqamile ngezembozo zemvula ukuthi futhi zinemininingwane ekhombisa ukukugcina uphila. (Sixoxa ngokuningiliziwe ngezikhwama ezingenawo amanzi nezingangeni manzi ngezansi)
Iphakethe lezingilazi. Izikhwama eziningi zinephakethe elilungele ukugcina izibuko noma izibuko zelanga. La mapokhethi afakwe indwangu ethambile ukuqinisekisa ukuthi amalensi akho ngeke aklwebheke.
Ikhamera crossover. Bobabili abathwebuli zithombe nabathwebuli bevidiyo bazohlomula kubahlukanisi nasemakamelweni akhethekile ukuqinisekisa ukuphepha kwamakhamera namalensi abo. Lokhu kuvame ukutholakala kuphela kojosaka abanikezelwe kumakhamera.
Isikilidi sikakhokho. Kwesinye isikhathi uzothola isikhwama esivule ibhodlela. Lena inoveli edlula noma yini, kepha uma uthanda ukuphuza isiphuzo ngemuva kokugibela, kuhle lokho.
Iphakethe lokuthambisa. Ojosaka abanesikhala sohlelo lwe-hydration balungele labo abadlala ngokujulile noma abangafuni ukuphatha iketela nabo. Abanye ojosaka empeleni bane-hydration system, kanti abanye banegumbi elilodwa kuphela. Ngakho-ke, qiniseka ukuhlola ngaphambi kokuthenga. I-hydration bladder nayo iza ngobukhulu obuhlukahlukene, ngakho-ke sicela unqume ukuthi ungakanani amanzi ocabanga ukuthi udinga ukuthenga amanzi angcono kakhulu kuwe.
Imininingwane ekhanyayo nezesekeli zokukhanya zebhayisikili. Uma ugibela ngaphambi kokuphuma kwelanga, ngemuva kokushona kwelanga, noma esimweni sezulu esibi, kubalulekile ukuthi ubheke imininingwane ekhanyayo nokunamathiselwe kokukhanya kwebhayisikili. Ngokukhanya okuqondile, imininingwane ekhanyayo izokhanya ebumnyameni. Ngakho-ke, uma imoto iza kuwe ebusuku, amalambu akhombisa ukukhanya okuvela ezingxenyeni ukuqinisekisa ukuthi umshayeli wemoto uyakubona. Isesekeli sokukhanya sebhayisikili sikuvumela ukuthi ukhombise isibalo sakho kwabanye usebenzisa ukukhanya okugcinwe kubhaka. Ngokungafani nemininingwane ekhanyayo, lokhu akudingi ukukhanya kuyo.
6. Ukupakisha nokulethwa kojosaka bezintaba zebhayisikili
(2) Usayizi wokupakisha ongashintshi owodwa: ubude obungu-26cm X ububanzi obungu-23cm X ukuphakama okungama-46cm, singenza ngokwezifiso usayizi wokupakisha wokuklama ngokuya ngezidingo zakho, ukuze sikusindisele impahla.
(3) Ukupakisha sebhithi: 28cm X 45cm X 48cm. 10PCS / ibhokisi. Impahla yekhathoni: K = K iphepha elincane likathayela elino-5-layer.
7. Isevisi yokuthengisa ngemuva
8. Imibuzo evame ukubuzwa
Q1. Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi uxhumane futhi uphendule?
Q9. Isikhathi sakho esingakanani ukukhiqizwa isampula phambili isikhathi? Ingabe unikeza amasampula? Ingabe kumahhala noma kuyengeziwe?
Q10: Uyakwamukela ukuhlolwa komuntu wesithathu? Ungakwazi yini ukunikeza imibiko yokuhlolwa komkhiqizo? Injani ikhwalithi yokukhiqiza kwakho?
Q11. Iyiphi indlela yokucaphuna oyamukelayo? Zingaki izinsuku zesikhathi sokucaphuna?
Amathegi ashisayo: Ubhaka webhayisikili wasentabeni, China, abakhiqizi, abahlinzeki, ifektri, okwenziwe ngokwezifiso, intengo, ikhotheshini, kusitoko
Oobhaka bebhola likanobhutshuzwayo